नेपाली आकासमा फ्लाई दुबईको विमान दुर्घटना, के छ अवस्था ? — Imandarmedia.com
१रामचन्द्रलाई अब प्रकाशमान बाधक, शेखरले गरे ‘ब्याक’ हुने संकेत
२विवादले घेरिन थालेपछि प्रचण्डलाई बम्पर सरप्राइज दिने तयारी
३इच्छाराजको सम्पत्ति बारे नयाँ खुलासा, यस्तो छ ईच्छाराजको सबैलाई चकित पार्ने सम्पत्ति विवरण
४भारतले दावी गर्दै आएको लिपुलेकमा चिनियाँ सेनाको प्रवेश, भारतमा तरंग
५हेलिकोप्टर दुर्घटनाको सम्भावित कारण खुल्यो, थाहा पाउने सबै चकित
६लिङ्देन नेतृत्वको पहिलो बैठक, कमल थापालाई काउन्टर दिन भए यस्ता निर्णय
७चीनमा उपचार गराईरहेका वर्षमान पुनले सुन्न पर्यो अर्को दुःखद खबर
८सेना प्रमुख चढेको हेलिकप्टर दुर्घ’टना ग्रस्त, के छ अबस्था ?
९कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक
१०एमाले केन्द्रीय कमिटीमा नयाँ अनुहारको बाहुल्य, पुराना नेतालाई खाना रुचन छोड्यो
११‘आत्महत्यागर्ने’ मेसिन संचालनमा, कसरी गरिन्छ ‘आत्महत्या’?
१२आस्चर्य पार्दै वामदेव गौतमलाई हराएका सञ्जयले ४ वर्षपछि खुलाए चुनाव जित्नुको रहस्य
नेपाली आकासमा फ्लाई दुबईको विमान दुर्घटना, के छ अवस्था ?
काठमाडौ। त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा फ्लाई दुबईको विमानमा चरा ठोक्किएको छ । जहाजको बायाँ पङ्खामा चरा ठोक्किएको त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका एसएसपी राजेशनाथ बास्तोलाले बताए । दुर्घटनामा मानवीय क्षती भने भएको छैन् ।
उडान नम्बर एफजेड-५७४ को विमान ७ बजेर १० मिनेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याण्ड हुने क्रममा चरा ठोक्किएको थियो । ८ बजेर १० मिनेटमा दुबई फर्कनु पर्ने सो जहाजको उडान स्थगित गरिएको छ। ​दुबई जानका लागी विमानस्थल पुगेका १ सय ७९ जना यात्रुलाई होटल सोल्टी र स्पोर्टस् होटलमा राखिएको छ ।
यस्तै यसअघि सीता एयरको जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थलको धावनमार्गमा बँदेलसँग ठोक्किएर दुर्घटनामा परेको थियो । हुम्लाको सिमिकोट उड्ने क्रममा जहाज धावनमार्गमा बँदेलसँग ठोक्किएको हो ।
यस्तै काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण हुनुपर्ने कतार एयरवेजको जहाज कोलकाता ‘डाइभर्ट’ भएको छ । यो जहाजले नेपालको आकाशमा निकै बेर फन्को मारेपछि काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण हुन सकेन । त्यसपछि उसलाई कोलकाता ‘डाइभर्ट’ गरिएको हो ।
यस्तो अवस्था आउनुमा सो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र यस आसपासमा तीब्र गतिको हावा भएको विमानस्थलका महाप्रवन्धक प्रतापबाबु तिवारीले जानकारी दिए ।
ठूलो लोड बोकेर आएको जहाजलाई तीब्र गतिमा हावा चलेका बेला अवतरण गर्दा जहाज अगाडि हुत्तिने सम्भावना हुने उनले जानकारी दिए ।
सोही कारण जोखिम नलिई कोलकता डाइभर्ट गरिएको हो । सो जहाज आजै काठमाडौं आउने समेत उनले जानकारी दिए । क्यूआर ६४६ उडान नम्बर भएको जहाज कोलकता डाइभर्ट भएको हो ।
यसरी विमान उड्ने हवाई मार्ग नेपालको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तय गर्ने गर्छ । हवाई मार्ग कसरी निश्चित गरिन्छ ? त्यो मार्गमा सुरक्षित उडानका लागि पाइलट र एटीसीले कसरी सहकार्य गर्छन् ? का
ठमाडौँ भित्रिने र यहाँबाट बाहिरिने हवाई मार्ग कति वटा र कस्ता छन् ? सुरक्षित उडानका लागि अन्य कस्ता उपाय अपनाइन्छन् ? यिनै जिज्ञासाको जवाफ खोज्न हामीले प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल, एटीसी ज्ञानेन्द्र भुल, इन्स्ट्रक्टर पाइलट प्रमोद थापा र बुद्ध एयरका अप्रेसन डाइरेक्टर सुवर्ण खरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
यस प्रकारको रुटमा पाइलटले आफ्नै आँखाले बाहिरी वातावरण हेरेर (भिजुअल फ्लाइट रुलका आधारमा) विमान उडाउँछ । त्यस्तै, एडभाइजरी रुट हुन्छ । यसमा केही स्थानमा एटीसीले नियन्त्रण गर्ने र केही ठाउँमा पाइलटले आफ् नो विवेकले उडान गर्ने गर्छ ।
यीबाहेक विमानस्थलबाट उडेपछि मुख्य रुट सुरु हुने ठाउँसम्म पु¥याउने र अवतरण गर्दा विमानलाई मुख्य रुट सकिएपछि विमानस्थलसम्म पुग्ने रुटलाई टर्मिनल रुट भनिन्छ ।
नेपालमा रहेका हवाई मार्गलाई विभिन्न नाम दिइएको भुल बताउँछन् । नेपालबाट बाहिर जाने एउटा रुटको नाम हो, लिमा ६२६ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट धार्के कम्पलसरी रिपोर्टिङ प्वाइन्ट, भरतपुर, पाल्पा, सुर्खेत, धनगढी हँुदै महेन्द्रनगर (ओनिसा) विन्दुबाट विमान बाहिरिने रुट हो यो ।
यही रुट हँदै भरतपुर, धनगढी, महेन्द्रनगर लगायतका विमानस्थलमा आन्तरिक उडान पनि हुने गर्छ । ब्राभो ३४५ रुट भने धार्के रिपोर्टिङ प्वाइन्ट, भरतपुर, मेघौली हुँदै भैरहवा (लुम्बी) विन्दुबाट लखनऊतर्फ जान्छ ।
त्यस्तै सिमरा विन्दु हुँदै जाने गल्फ ५९० नेपाल प्रवेशको अर्को रुट हो । पश्चिमबाट आउने सबै विमान यही रुटबाट भित्रिन्छन् । दुवैतर्फबाट आउने विमान गुराँस विन्दुबाट काठमाडौँ छिर्छन् ।
आईएफआर प्रणालीमा विमान उडाउँदा पूर्व दिशातर्फ जाँदा अड थाउजेन्ड अर्थात् १५, १७, १९ हजार फिटमा रहेर उडान गर्नु पर्ने हुन्छ । पश्चिम दिशातर्फ जाँदा इभन थाउजेन्ड अर्थात् १६, १८, २० हजार फिटमा उडान गर्नुपर्छ । ‘भीएफआरमा रहेर उडान गर्नु परेमा पूर्वतर्फ उडान गर्दा अड थाउजेन्ड प्लास फाइव हन्ड्रेड अर्थात १९ हजार ५००, १७ हजार ५०० फिट मा रहेर उडान गरिन्छ,’
भुलले भने, ‘पश्चिमतर्फ उडान गर्दा इभन थाउजेन प्लस फाइव हन्ड्रेडको उचाइमा उडान गर्ने व्यवस्था छ ।’ यी दुईमध्ये जुनसुकै प्रणालीमा उडान गर्दा पनि दुई विमानबीच एक हजार फिटको दूरी रहनुपर्छ ।
‘हरेक रुटमा निश्चित रिपोर्टिङ प्वाइन्ट हुन्छन्,’ एटीसी भुल भन्छन्, ‘त्यहाँ पुगेपछि पाइलटले एटीसीलाई विमानको अवस्थाबारे रिपोर्ट गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार काठमाडौँबाट पोखरा जाँदा धार्के र पालुङटारमा रिपोर्टिङ प्वाइन्ट छन् ।
त्यस्तै अन्य रुटमा पनि छुट्टाछुट्टै रिपोर्टिङ प्वाइन्ट रहेको उनको भनाइ छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेका विमानले धार्के र इग्रिस रिपोर्टिङ प्वाइन्टबाट भने अनिवार्य रिपोर्ट गर्नुपर्छ । त्यसैले यी दुई स्थानलाई कम्पलसरी रिपोर्टिङ प्वाइन्ट नाम दिइएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको विमानलाई १० देखि १८ किमि (५ देखि १० नटिकल माइल) सम्म त्यहाँस्थित एरोडम कन्ट्रोल टावरले गाइड गर्छ । १९ देखि ९० किमिसम्म अर्थात् ५० नटिकल माइल (मनकामना, नारायनघाट, सिमरा, रामेछाप, लालबन्दी, आदि) सम्मका क्षेत्रमा एप्रोच कन्ट्रोल टावरले गाइड गर्छ भने त्यसभन्दा बाहिर एरिया कन्ट्रोल टावरले पाइलटलाई आवश्यक निर्देशन दिने गर्छ।
उदाहरणका लागि, काठमाडौंबाट धनगढी भीएफआर उडान गरी जानु परेमा १८ हजार पाँच सय फिटमा उडान गरिन्छ । काठमाडौं विमानस्थलबाट १० देखि १८ किलोमिटर (५ देखि १० नटिकल माइल) सम्म एरोडम कन्ट्रोल टावरले, १९ देखि ९० किलो मिटर सम्म अर्थात,
५० नटिकल माइलसम्म एप्रोच कन्ट्रोल टावरले र त्यसपछि तुल्सीपुर नपुग्दासम्म एरिया कन्ट्रोल टावरले मार्गनिर्देशन गर्छ। तुल्सीपुर पुगेपछि नेपालगन्ज टावरले विमानलाई गाइड गर्छ । नेपालगन्जबाट टीकापुर पुगेपछि विमान धनगडी टावरको कन्ट्रोलमा हुन्छ।
‘आत्महत्यागर्ने’ मेसिन संचालनमा, कसरी गरिन्छ ‘आत्महत्या’?